ओलीसँग पूर्व एमाले गरम, माओवादी नरम !
अहिलेका युवायुवती के चाहन्छन ?
काँग्रेसको महासमिति बैठक कम्तीमा एक दिन लम्बीने
कांग्रेसमा अब काेषाध्यक्षबाहेक सबैले चुनाव जितेर आउनुपर्ने
कसरी होला.? छाउप्रथाको अन्त्य ।
खानेपानी मन्त्रालय द्धारा विज्ञप्ति जारी, मेलम्चीको पानी समयमै पारी
प्रहरी बिरुद्ध उजुरी
४२ घण्टा पछी शव झिकियो
कहालिलाग्दो विपत्ती , आफ्नै ले ‘ निमोठे ’ कलिला कोपिला
२०७५ श्रावण ८ मंगलबार
यूरोप भम्रणको दोस्रो अभ्यास खेलमा लन्डनको सेन्ट क्रस साइमोन्डियन्स क्रिकेट क्लबले नेपाललार्इ १ सय ६९ रनको लक्ष्य दिएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सेन्ट क्रसले निर्धारित २० अोभरमा ६ विकेट गुमाएर १ सय ६८ रन बनाएको हो।
नियमित कप्तान पारस खड्कालार्इ अाराम दिइएको यस टी-२० खेलको कप्तानी ज्ञानेन्द्र मल्लले गरिरहेका छन्। पारसले यसअघि भएको पहिलो ह्याम्पशायर होग्स क्रिकेट क्लबविरुद्धको पहिलो एक दिवसीय अभ्यास खेलमा १ सय ६१ रनको पारी खेलेका थिए।
शनिबार राति सम्पन्न पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालले हैम्पशायर होग्सलार्इ २ सय ४३ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो। कप्तान पारसले १ सय ६ बलको सामना गर्दै १ सय ६१ रन जोडेका थिए। सो क्रममा पारसले १९ चौका र ७ छक्का प्रहार गरेका पारसलार्इ अाजको दोस्रो खेलमा भने अाराम दिइएको हो।